Air Zimbabwe suspended from SA airports over debt - Daily Afrika News
A new Zimbabwe Airways Boeing 777-200 lands in Harare, Zimbabwe, April 11, 2018. Photo:REUTERS/Philimon Bulawayo
JOHANNESBURG- Air Zimbabwe has been barred from using South Africa’s airports.
Insiders at Air Zimbabwe told TimesLIVE that one of the national airline’s aircraft, a Boeing 767-200, was seized at Johannesburg’s OR Tambo International Airport on Wednesday.
As a cash client, the airline was required to pay on each Monday the amounts owing for landing fees, parking fees and the passenger service charge for its weekly flights.
Due to the suspension by Acsa, Air Zimbabwe could not operate its Johannesburg-Harare flight on Wednesday and this resulted in some passengers failing to travel while others were accommodated on other airlines.
Acsa said that Air Zimbabwe had not adhered to the cash basis terms for using its airports.
“As a cash client, Air Zimbabwe is required to settle on each Monday the amounts owing for landing fees, parking fees and the passenger service charge for its weekly flights, as well as an amount towards settling arrears on its account,” Acsa spokesperson Trevor Jones told eNCA.
“The company informed Air Zimbabwe by letter on 18 October that it will not be allowed to depart from any of Airports Company South Africa’s nine airports and that the prohibition will remain in place until outstanding amounts are settled,” Acsa said in a statement according to eNCA.
Airline SuspendedAirports Company South AfricaAitr ZimbabweBid Air ServicesOR Tambo International Airport